चिसोले जनजीवन प्रभावित | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / चिसोले जनजीवन प्रभावित
Posted by: युगबोध in समाचार December 6, 2017	0 75 Views
घो राही, १९ मंसिर । दुई दिनयता ह्वात्तै बढे को चिसो का कारण सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित बन्दै गइरहे को छ । चिसो का कारण किसान, विद्यार्थी, पै दलयात्री, बालबालिका, युवा र बृद्धबृद्धाहरुको दै निकी कष्टकर बन्दै गइरहे को छ । चिसो का कारण पै दल यात्रीहरुको चहलपहल पनि घटे को छ भने स् वास् थ्य संस् थाहरुमा बिरामीहरुको चाप ह्वात्तै बढे को छ । राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पताल दर्ता फा“टका अनुसार दुई दिनमा मात्रै करिव आठ सय बिरामी अस् पतालमा भित्रिएका छन् । दुई दिनमा श् वासप्रश्वास, रुघाखो की, ज्वरो , निमो नियालगायतका बिरामी बढी दे खिएको अस् पतालले जनाएको छ ।
राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालका फिजिसियन डा. जीतनारायण यादवले चिसो का कारण श्वासप्रश्वास, रुघाखो की, निमो नियालगायत अन्य संक्रमित बिरामी बढी भित्रिएको बताउनुभयो  । चिसो एकाएक ह्वात्तै बढे पछि बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरु प्रत्यक्ष मारमा परे को उहा“ले बताउनुभयो  ।
‘चिसो का कारण सबै भन्दा बढी बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरु बढी प्रभावित बने का छन् । निमो निया, संक्रमित ज्वरो , रुघाखो की र बृद्धबृद्धाहरुमा दम, मुटु, फो क्सो , हार्डजो र्नी, छाती दुख्ने , घा“टी, डाइरियालगायतका समस् या दुई दिनमा बढी दे खिएका छन् ।’
गत बिहीवार करिव तीन सय बिरामीलाई से वा दिइएको जनाउ“दै अस् पतालले सो मवार र मंगलवार मात्रै सात सय ७९ जना विरामीले नाम दर्ता गराएका छन् । जसमा सो मवार मात्रै तीन सय ८७ र मंगलवार तीन सय ९४ जना बिरामीले से वा लिएका छन ।
चिसो स“गै बिरामीको संख्या दिनानु दिन बृद्धि हु“दै जान थाले पछि अस् पतालमा से वामा सामान्य हतारो गर्नुपरे को डा. यादवले बताउनुभयो  । उहा“ले भन्नुभयो – ‘एकै समयमा बिरामीको लहर चले को छ । समयमै सबै लाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अस् पतालमा साधन स्रो तको कमी छ । आपत विपतका बे लामा बिरामीका लागि अन्य वै कल्पिक उपाय पनि के ही छै न ।’
चिसो का बिरामीहरुको उपचारमा संलग्न डा. यादवका अनुसार बढी बिरामी दक्षिणी भे गबाट आउने गरे का छन् । दक्षिणी भे गमा शितलहर अलि बाक्लो चल्ने भएकाले दक्षिणी भे गका नागरिकहरु चिसो को उच्च मारमा पर्ने गरे को उहा“ले बताउनुभयो  । पूर्वी तथा पश्चिम दाङका चौ धरी, मगर र दलित समुदायका बिरामीहरु बढी दे खिएको उहा“ले बताउनुभयो  ।
चिसो को उच्च जो खिममा बृद्धबृद्धा र बालबालिकाहरु बढी पर्ने गरे काले उनीहरुको हे रचाहमै उच्च सतर्कता अपनाउन डा. यादवले सुझाव दिनुभयो  । तातो झो लिलो खाने कुरा खाने , मनतातो तो रीको ते ल पै दलमा लगाई सक्ने , को ठा तातो बनाइ राख्ने , न्यानो कपडा लगाउने , चिसो खाने कुराहरु सकभर खा“दै नखाने यदि खान परे मा तातो बनाई खाने , बाहिर जा“दा टो पी, गलबन्दी लगाउने , नियमितरुपमा तातो पानी खाने गर्नाले चिसो बाट जो गिन सकिने उहा“को सुझाव छ । उहा“ले भन्नुभयो – ‘पछिल्लो समय विद्युतीय उपकरणको विकासस“गै लो कप्रिय बन्दै गइरहे को हिटरले मानव स् वास् थ्यका लागि के ही प्रभाव पार्न सक्ने पनि बताउनुभयो  । बन्द को ठामा हिटर राखे र तातो लिदा आ“खा, नाक , मुख र श्वासप्रश्वास नलीमा सुख्खा र खस्रो पन निकाल्ने भएकाले हिटर ताप्नुभन्दा पानी उमाले र बाफले तातो लिन उपयुक्त हुने उहा“ले बताउनुभयो  ।
चिसो स“गै अस् पतालमा बिरामीको संख्या ह्वात्तै वढ्दा उपचार से वामा के ही असहज बन्ने गरे को अस् पतालको भनाइ छ । अस् पताल व्यवस् थापनका फा“टका कर्मचारीहरु निर्वाचनमा
लागि खटिएपछि बिरामी व्यवस् थापनका लागि के ही समस् या बने को अस् पतालको भनाइ छ ।
चक्रवातका कारण मौ सममा गडबडी
अरब सागरमा उत्पन्न भएको शक्तिशाली सामुद्रिक चक्रवात (साइक्लो न) का कारण ने पालको सुदूर र मध्यपश्चिमी भागको आकाशमा बदली भएको छ । जल तथा मौ सम पूर्वानुमान महाशाखाका मौ समविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार शक्तिशाली चक्रवातको बाहिरी घे राले फ्या“के को शक्तिशाली वायुले बादल बनाएपछि सुदूर र मध्यपश्चिमका मध्यपहाडी र हिमाली क्षे त्रमा बदली भएको हो  ।
भारतको राजस् थान, बिहारलगायतका क्षे त्रमा तीन दिनदे खि चक्रवातको प्रत्यक्ष असर दे खा परे को छ । ने पालमा चाहि“ सो मवार बिहानदे खि मात्र असर शुरु भएको हो  । चक्रवातबाट उत्पन्न हुने वायु प्रभावशाली हुने र त्यो वायुस“गै पानीको मात्रा पनि हुने भएकाले क्षणभरमै बादल उत्पन्न भएर मौ सममा बदलाब आउ“छ । चक्रवातले निम्त्याएको वायुस“गै पश्चिम वायुको समे त प्रभाव दे खिएकाले मौ समी बदलाव हुन सहयो ग पुगे को मौ समविद्हरुको विश्ले षण छ ।
महाशाखाले भू–उपग्रह (स् याटे लाइट) बाट प्राप्त तस् िवर तथा गणितीय मौ समको विश्ले षण गर्दै बुधवारसम्मको सम्भावित मौ समी अवस् थाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको छ । जसअनुसार सो मवारदे खि पश्चिम र मध्य क्षे त्रको हिमाली भे गमा वदली शुरु भइसके को छ भने सो मवार राति काठमाडौ ंसम्मकै आकाशमा बाक्लो बादलले ढाक्ने छ । उच्च हिमाली भागमा सो मवार रातिदे खि नै हिमपात हुने छ भने मंगलवारदे खि सुदूर र मध्य पश्चिम क्षे त्रमा हिमाली र मध्यपहाडी क्षे त्रमा वर्षा सहित हिमपात हुने छ ।
Previous: परिचयपत्र लिन मतदातामा उत्साह
Next: जिल्लामा मतपे टिका पु¥याउन बर्दिया र सुर्खेतको बाटो